Nnwom 25:1-7 NA-TWI | Biblica
Nnwom 25:1-7 NA-TWI
O, wo Awurade na mebɔ wo mpae; wo mu, me Nyankopɔn, na mahotoso wɔ. Gye me fi nkogu animguase mu. Mma m’atamfo ani mmmere me. Wɔn a wɔde wɔn ho to wo so no nni nkogu, na mmom wɔn a wɔsɔre tia wo no.
Kyerɛ me w’akwan, O Awurade; da no adi kyerɛ me. Kyerɛ me na mentena ase wo nokware mu; efisɛ, wo ne me Nyankopɔn a wugye me nkwa. Daa mede me ho to wo so. Kae, O Awurade, w’adɔe ne wo dɔ a efi tete woada no adi akyerɛ me no. Fa me mmabun mu bɔne ne mfomso kyɛ me. Kae me wo dɔ a wode dɔ me daa no, Awurade!
Read More of Nnwom 25